OMN: Gabaasa Addaa (Maastar Pilaanii “Addis Ababa”) Guraandhala 16, 2015
Posted: Guraandhala/February 18, 2015 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (1)
Credits/Tags: Abay Tsehaye, Oromia Media Network
Xiiqii!! Booree!!! Nu ga’a dubbiin jaritti habashaa kana. Lubbuu, eenumaaa fi qabeenynii keenyaa bilisumma keenyaafi. Kana caalaa qaanii fi boquu gadi buufinee jirachuurra injifanno ykn du’a filannoon hafe. Nu ga’e!
Yaa saba Oromo, dhiiraa, dubartti, dargaggo otto hin jedhiin Gurmuun ka’i!! harka wal qabadhu!! hiriiraan eenyummakee fi didda kee (FDG) agarsiisi !!. Yoo harra bookisaa jara kanaafi deebii dhowwanne, dura dhaabachuu didnne, ni dhumna, ni qalamna, ni lafa irra haxaawamna. Kana teenyee hin eeganu, hin fudhannu.
Kanaafuu hundi keenyaa kana dura haa dhabbanu. Hatataamaan guyya waliin murteeffannee tokkotti akka Abay Tsehaye fi Mootumaan biyyichaa saba Oromoo dhiisama gafatanniif. Guyyaa isaa Qeerroon haa murteesuu, FDG haa qindeesuu
1). Oromoon kan Finfinne fi naannoo finfinne jiru hundi (Adaamaa amma Amboo ti, Laga daadhii ti amma Walisoo ti kan argamaani) kalatti hundaan harka wal qabatee, farda isaa yaabbatte hiriiruun, gara magaalaa Finfinne ti gara mana mootummaati hiriira FDG bau qaba.
2. Kan naanoo Finfiinee fi Finfinnee hin jiraanne biyya jiruu Bulchaa naannoo jirru hundumatti FDG hiriiraa ba’u qabna.
3. Manni Barumsaa sadarqaa hunda (1. ffa ti amma Unbarsititti) yeroo duraa fi torbaan tokkofi didda
ijoolee fi didda barsiisootaan haa lagatamaan. Isaanis FDG kanaratti qindeesuufi tajajiluun qooda
gudda haa fudhatani.
4. Qotee bulaa fi daldalaan yeroo duraa fi torbaan tokkofi qabeenyaa isaani gabaa fi dhiyeesuu haa dhaaban
5. lafa jiruu Oromia hundaatti jara kanaaraa waa bituu ykn itti gurguruu haa dhaabnu.
6. Yeroo dhumaafi OPDOn Abay Tsehaye (TPLF) ykn saba oromoo haa filatu. Gaaffi fi didda sabaafi deebi’i qubsaa lachuu qabu. Yoo kana hin taa’nee saba bukke dhaabachuun FDG haa jabesaani. Isaaniinis bilisa baafna.
7. Sabni oromoo gutuutii gutuuti filanno TPLF haa lagatu.
Kun yeroo ammaf FDG isa duraa ta’uun yoo kanaan waa’ee Masterplan Finfinne fi gaafootaa Oromo hafannif deebi’ii yoo dhabne hiriiraa fi fincilaa akkasumaas didda kana caaluun amma bilisa baanutii itti fufna.
Oromian ni bilisoomti! Ni birmadoofti.